Faahfaahin Laga Helayo Qarax Ka Dhacay Duleedka Muqdisho. – Bogga Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Qarax Ka Dhacay Duleedka Muqdisho.
January 8, 2018 5:49 am Views: 179
Wararka laga helayo deegaanka Ceelasha Biyaha ayaa sheegaya in qarax xooggan lala helay maleeshiyaadka dowladda Mareykanku tababartay ee loo yaqaan Alpha Group, ilo wareedyo ayaa sheegaya in ugu yaraan laba gaari oo nuuca Cabdi bilaha loo yaqaan ay ku burburiyeen qaraxa oo dhawaqiisa laga maqlay inta badan deegaannada dhaca duleedyada Muqdisho.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ku dhawaad 10 askari ay ku dhinteen qaraxa, goobta weerarku ka dhacay oo ah wadada laamiga ayaa xirneed xalay fiidkii illaa iyo saaka aroortii hore.
Mas’uuliyadda qaraxan waxaa sheegatay Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab, maleeshiyaadka Alpha Group ayaa ah calooshood u shaqeystayaal loo carbiyay dhibaateynta shacabka muslimiinta ah waana Maleeshiyo xilliyada saqda dhexe guryaha ugu dhaca dadka ku eedeysan in ay diintooda ku dhegganyihiin.
Qaraxan ayaa kusoo aadaya xilli sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay weerar qarax ah oo loo adeegsaday Bamka noocyada gacanta laga tuura lagu weeraray saldhiga degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho waxeyna Bamka ku qarxay gudaha saldhiga taasi oo muujineysa iney jirto khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo maleeshiyaatka dowlada Ridada lagu gaarsiiyay qaraxaasi.